Cajón de Sastre၊ စိတ်ဝင်စားစရာသိချင်စိတ်များ - Ikkaro
စတင်ပြုလုပ်ခြင်း >> သည်အခြားအကြောင်းအရာများ
ဘလော့ဂ်ဘေးအန္တရာယ်မဟုတ်သောအရောအနှော။ အဓိကဘလော့ဂ်အမျိုးအစားများပြင်ပတွင်မပါ ၀ င်သောခေါင်းစဉ်မဲ့ခေါင်းစဉ်များ။ ဒီနေရာတွင် DIY နှင့်ပတ်သက်သောအရာများနှင့်တီထွင်မှုများစွာတွေ့လိမ့်မည်။
သိပ္ပံပညာ၊ သတင်းများ၊ သိချင်စိတ်များ၊ မဖြစ်နိုင်သည့်တီထွင်မှုသတင်းများ။ သင်အမှန်တကယ်နှစ်သက်မည့်စက်ဘီးများ၊ ဘီးများနှင့် Goldberg စက်များ၊ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များ၊ ဘောင်းဘီတိုများ၊ NASA အစီအစဉ်များအကြောင်းပြောနေဆဲဖြစ်သည်။
စိတ်ကူးကဒီအံဆွဲကိုအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်းစုစည်းပြီး၎င်းကိုအကြောင်းအရာများအဖြစ်စုစည်းရန်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်မင်းသိတယ် ...
Wallapop တွင် သတိပေးချက်များကို ဖန်တီးနည်း
ဒါ ကျွန်ုပ်တို့၏ Wallapop အက်ပ်၏ ရိုးရှင်းသောလှည့်ကွက်၊ အမှန်တကယ် ကောင်းမွန်သော စနစ်ထည့်သွင်းမှုတစ်ခု ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသည့် ထုတ်ကုန်အသစ်တစ်ခုပေါ်လာသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့အား အကြောင်းကြားရန်။ ဤနည်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အမြဲတမ်းဝင်ရောက်၍ အသစ်သောအရာကို ရှာဖွေနေရန် မလိုအပ်ပါ။
ရုံ ကျွန်ုပ်တို့ လိုအပ်သော သတိပေးချက်များကို ဖန်တီးပြီး အကြောင်းကြားချက်များကို ပေးပို့ပါမည်။စစ်ထုတ်မှုများတွင် ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ထားသော ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် ကိုက်ညီသည့် ထုတ်ကုန်အသစ်တစ်ခုကို ပို့စ်တင်သည့်အခါ စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းများ။
ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဥပမာတစ်ခုက Nintendo Switch ကို ရှာနေတာ။ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် Nintendo Switch ကို စျေးနှုန်းတစ်ခုအထိ၊ အကွာအဝေးမှ စစ်ထုတ်မှု စသည်တို့ဖြင့် ရောင်းချသောအခါတွင် Wallapop သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးချက်တစ်ခု ပြုလုပ်နိုင်သည်။
El Carmen de Onda သဘာဝသိပ္ပံပြတိုက်
သြဂုတ်လ3ရက်နေ့တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် Museo del Carmen de Onda သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပါသည်။ မိသားစုရဲ့ အငယ်ဆုံးအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို နှိုးဆွပေးနိုင်တဲ့ သဘာဝသိပ္ပံပြတိုက်။2နာရီခန့်ကြာမည့် လည်ပတ်မှုပြုလုပ်ရန် သင့်လျော်ပြီး လူတစ်ဦးလျှင် €5ကျသင့်သည် သို့မဟုတ် ကျောင်းလေ့လာရေးခရီးများစီစဉ်ရန် သင့်တော်ပါသည်။
အဲဒီဒေသမှာဆိုရင် ပြတိုက်နဲ့ ပြတိုက်ကို သွားကြည့်လို့ရပါတယ်။ San José၏ဂူများ Vall d'Uixó ၏
သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင်ငါတို့သည်မိန်းကလေးများနှင့်ဤခရီးစဉ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့ပေမယ့်လူသိများတဲ့ခရီးဆုံးတွေကတော့ lCuevas de San Joséကဲ့သို့၎င်း၏မြေအောက်မြစ်နှင့် ၂၀၀ မီတာအမြင့်တွင် Iberian-Roman မြို့တည်ရှိရာတောင်ကိုတက်ပါ။ယဉ်ကျေးမှုစိတ်ဝင်စားမှု၏အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပူးတွဲလည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ မြို့အတွက်ငါတစ်ခုခုသိချင်ရင်လမ်းညွှန်နဲ့သွားပါလို့ငါအကြံပေးတယ်။
ကလေးများနှင့်အတူမရှိ၊ သွားရန်နှင့်စံပြဖြစ်ရန်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်၊ သူတို့သည်မိနစ် ၄၀ ခရီးတစ်လျှောက်လုံးသူတို့၏ပါးစပ်ကိုဖွင့်ထားခဲ့ပြီး၎င်းအားကျွန်ုပ်တို့အားများစွာသောအရာများကိုရှင်းပြခွင့်ပြုသည်။
လိုဏ်ဂူတွေမှာသူတို့ကတစ်ချိန်ချိန်မှာဓာတ်ပုံရိုက်တာကိုခွင့်မပြုဘဲငါတို့ကသူတို့ကို flash မပါဘဲရိုက်ခွင့်မပြုဘူး။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံ ၂ ပုံကိုသာကျွန်ုပ်၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှယူထားသည်။
ဤဆောင်းပါးသည်ဆောင်းပါး၏ရလဒ်အဖြစ်မွေးဖွားခဲ့သည် နေရတာအရမ်းပူတယ် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင် National Geographic တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး Elizabeth Royte ရေးသားသောအရာသည်လူသားများနှင့်သူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်၌ပိုလျှံသောအပူများဖြစ်ပေါ်နေသောပြသနာများ၊ ကမ္ဘာကြီးပေါ်အပူချိန်မြင့်တက်ခြင်းနှင့်လေအေးပေးစက်နည်းပညာနှင့်မည်သို့တိုးတက်လာသည်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။
ဆိုးရွားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်။ မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုများကိုတိုက်ဖျက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အအေးခန်းလိုအပ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအမြောက်အမြားကိုသုံးစွဲနေပြီးအထူးသဖြင့်ဆင်းရဲသောဒေသများတွင်လူ ဦး ရေပိုများလာသည်။
ပြဿနာအပိုင်း၌ကြည့်ရသည့်အချက်မှာအချက်အလက်များသည်အံ့မခန်းဖြစ်သည်။ ရရှိနိုင်သည့်ကရိယာများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုမိုအေးမြစေရန်နှင့်တိုးတက်ရန်နည်းလမ်းသစ်များရှာဖွေရန်အစပျိုးနေပြီဖြစ်သည်။ မင်းကိုယ်မင်းအပ်နှံဖို့ပရောဂျက်အသစ်တစ်ခုရှာနေတယ်ဆိုရင်၊ ဒါကမင်းကိုလူအများကြီးကိုကူညီနိုင်တယ်။
Ikkaro တွင်ဆက်ဆံသောအလားတူဘာသာရပ်မှာa၏ဆောက်လုပ်ရေးဖြစ်သည် လျှပ်စစ်မီးမရှိသောရေခဲသေတ္တာ.
ဤဆောင်းပါးသည်ဆောင်းပါးတိုများဖြစ်သည် မြောက်အမေရိက၏မဟာရေကန်ကျွန်တော့်ကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့တဲ့landရာမမြေပုံ။ မှတ်စုများကို National Geographic မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်မှဆောင်းပါးတစ်ခုမှရယူပြီး၊ ငါအဆုံးသတ်ကျမ်းကိုးစာရင်းထားခဲ့ပါ။
ကျနော်တို့ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာစကားပြောနှင့် Native မြောက်အမေရိက Comanche အတွက်သတ်မှတ်ထားကြသည်သောဝတ္ထုနှင့်အက်ဆေး အရူးမြင်းနှင့် Custer
အခုဟုတ်တယ် ၎င်းသည် ၁၂ နှစ်အတွင်း Ikkaro တွင်အကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည်။ ကြည့်ရှုပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် ၀ က်ဘ်ပေါ်၌သော်လည်းကောင်း၊ စဉ်းစားစရာတွေအများကြီးပြီးနောက်ငါ Ikkaro ကိုကိုယ်ပိုင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါယခုတိုင်အောင်ငါထုတ်ဝေအားလုံးအရာတစ်ခု filter ကိုလွန်။ အရာအားလုံးနီးကပ်စွာဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ယခုပုံမှန်လမ်းမှသွေဖည်နိုင်သည့်အရာအချို့ပေါ်လာတော့မည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သိသည်မှာရွေးချယ်ထားသည့်ခေါင်းစဉ်ကဲ့သို့အရေးကြီးသည်ချဉ်းကပ်နည်း၊ ၎င်းကိုတင်ပြခြင်းနည်းလမ်းနှင့်ကျန် ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်ကိုက်ညီခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ဝဘ်ကိုအဆုံးမသတ်စေချင်ပေမယ့်ကိရိယာတခုအနေနဲ့အသုံးပြုဖို့လိုတယ်။ လုပ်ပြီးသောအရာများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန်စတင်ပြီးသောအရာများကိုစတင်အသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်ချင်ပါသည်။ ပေါ်ပေါက်လာသောစိတ်ကူးများ၊
ငါစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုထုတ်ယူမယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်ငါတစ်ယောက်ယောက်နဲ့တွေ့ကြုံခဲ့ဖူးတဲ့အတွေ့အကြုံဒါမှမဟုတ်ဟောပြောချက်ကိုပြောပြမှာလဲ။ Ikkaro ကိုကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဖန်တီးသည့်အချိန်ကတည်းကအခြေအနေတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားသည်။ ငါပျော်စရာ၌အနိုင်ရပါလိမ့်မယ်
အဆုံးမှာတော့ငါတို့လုပ်သမျှအရာအားလုံး၊ ငါတို့ကိုဖြစ်ပျက်သမျှနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားသောအရာများဖြစ်ကြသည်။ ငါစွန့်ပစ်ခဲ့သောအချို့ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် themes များစုစည်းပြီးသားပါပြီး၎င်းသည် Ikkaro တွင်ပေါင်းစည်းထားသည်။
ငါများသောအားဖြင့်ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာဘုရင်တွေရဲ့လက်ဆောင်တွေကိုမျှဝေလေ့ရှိတယ်၊ ကံကောင်းတာကသူတို့ဟာငါ့ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရာတွေကိုချန်ထားခဲ့တာမို့သူတို့ကိုမတောင်းဘဲဘလော့ဂ်မှာစကားပြောဖို့ဖြစ်လာတယ်။ အခုဆိုရင်ကျွန်မရဲ့လက်ဆောင်တွေအပြင် ၃ နှစ်နဲ့ ၅ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးနှစ်ယောက်နဲ့သူမအရမ်းစိတ်ဝင်စားလာကြပါပြီ။
ဒီနှစ်မှာတော့ဒီစာအုပ်ကိုမထုတ်ဝေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်၊ ပြီးတော့သူကစိတ်ဝင်စားဖို့မကောင်းဘူးလို့ထင်တဲ့အတွက်အံ့သြသွားတယ်၊ လူအတော်များများကဒီအကြောင်းတွေမေးခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ဒီဆောင်းပါးကသူတို့အကြောင်း၊ သူတို့ရဲ့မှတ်ချက်များ၊ အီးမေးလ်များဖြင့်ငါ့ကိုအားပေးခဲ့တဲ့ဒီလူတွေအကြောင်းပါ။ ထုတ်ဝေမှုနောက်ကျနေလို့စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတွေကြောင့်အရင်ကမဖြစ်နိုင်ဘူး။
ကျွန်ုပ်၏ ၈.၅ လက်မ LCD Writing LZS85 (Boggie Board)
ဒါကဘယ်လိုပုံပြင်လဲ အမှတ်တမဲ့ကျွန်ုပ်သည် LCD Writing Tablet ဖြင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ငါနေ့တိုင်းလိုပဲလှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး Gearbest မှာကျွန်တော့်အတွက်ဒီဂျစ်တယ်ဂရပ်ဖစ်တက်ဘလက်တစ်ခုရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်၊ ငါတို့က Wacom လိုပဲယူရို ၈ ဒေါ်လာပါ။ ရှစ်ယူရို !!! ဆိုးတာပဲ၊ တစ်ခါတလေကျွန်တော်စိတ်ထဲထည့်ထားတဲ့အရာလေးခုလုပ်ရတာတန်တယ်။ ဒါနဲ့ငါဝယ်လိုက်တယ်။
ငါလက်ခံရရှိသောအခါ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသည်၊ ၎င်းကိုမည်သည့်နေရာနှင့်မဆိုချိတ်ဆက်ရန်၊ သို့မဟုတ်၎င်းကိုသို့မဟုတ်မည်သည့်အရာနှင့်မျှချိတ်ဆက်ရန်ဘာမျှမရှိကြောင်းတွေ့မြင်သောအခါအံ့အားသင့်စရာဖြစ်သည်။ ဒါနဲ့ငါဖိုင်ကိုပြန်သွားတယ်။ ဟုတ်တယ် ... ငါပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ LCD Writing Tablet တစ်ခုရှိတယ်၊ အလျင်အမြန်ပဲအဲ့ဒီနာမည်ကငါ့ကိုလမ်းလွဲစေခဲ့တယ်လို့ငါထင်တယ်။ အချို့က၎င်းကိုကုန်ပစ္စည်းကိုကိုယ်စားပြုသောတံဆိပ်ဖြစ်သော်လည်း Boggie Board ဟုခေါ်ကြသည်။
Todd MacLellan နှင့်သူ၏စာအုပ်ပုံများမှကျွန်ုပ်မသိဘဲ Knolling ကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေသည် အရာများအပြင်ထွက်ပေါ်လာ: ခေတ်သစ် Live များအတွက် Teardown လက်စွဲစာအုပ် အဲဒီပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေကကျွန်တော့်ကိုချစ်ခင်လာစေပြီးစာရေးသူအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကရှာဖွေခဲ့တယ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနည်းလမ်းအဖြစ် Knollingနေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းများမှအလှတရားကိုဖန်တီးရန်အနုပညာပုံစံတစ်ခုအနေဖြင့်လည်းဖြစ်သည်။